Mpt ကောင်းမကောင်း - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့လိုင်းက MPT ADSL 256 လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို ့ဂျာ စက်ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့သူ main pages ထဲ ၀င်ပြီးတော့User name နဲ့Password
ထဲ ့ရပါတယ် ..အဲဓီမှာ ဂျာ တိုင်ပတ်တာ..တစ်ခါတစ်လေ.(အမြဲတမ်းပါပဲဂျာ) ဖွင့်မရတာတာက များနေတယ်။ ပြီးတော ့ပွင် ့သွားလို့username နဲ ့Password ထည် ့ပြီး သုံးနေရင်းနဲ ့လဲ.
ပြုတ်ချင်ပြုတ်သွားပြန်ရော..ကဲ ့..အနော် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ စိတ်လေ တယ်။
အဲဒီလို မျိုးမဖြစ်ချင်ရင် Opera broswer မှာ5မိနစ်တစ်ခါ wedpages ကို reload လုပ်တဲ ့
system ရှိတယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်စမ်းပြီးပြီး မရဖူးဂျ။
အဲဒီကောင်ကို ဖွင့်လို ့ကို မရတာ MPT main pages ကို။ ဖွင့်လို ့ရရင်လည်း IE မှာ ပွင့်မှ ကျန်တာတွေ
အလုပ်လုပ်တာဆိုတော ့.နည်းနည်းလေး ကန် ့လန် ့ကန် ့လန် ့နဲ ့...တော်တော်စိတ်ပျက်စရာဂျာ။
အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိတဲ ့သူများ ကူညီပါအုံး။
ပြီးတော့လိုင်း၀ယ်ရင် သူတို ့ပေးတဲ ့မော်ဒန်းကဒ် အဖြူလေး သိတယ်မလား။ အဲဒါ သူံးစားလို ့ကိုမရတာဂျာ.အဟုတ်။ ကျွန်တော်ဆို ၂၅၆ ယူထားတယ် ..ဒါပေ ့မယ် သူ မော်ဒန်းထဲ မှာ ၁၂၈ ကန် ့ထားတယ် လို ့ကြားတယ်. အဲဒါတော ့ဟုတ်လားမသိဖူး။ ဒါပေ ့မယ် မနေ ့က ကျွန်တော်အကို တစ်ယောက် ကျွန်တော် ့ရှေ ့တင် သူ ့လိုင်းကို စမ်းပြတာ။ သူက ၅၁၂ အဲဒါကို ၂၅၆ ကန် ့ထားတယ်
မော်ဒန်းက။ အဲဒါနဲ ့... သူ ၀ယ်ထားတဲ ့တစ်ခြားမော်ဒန်းမှာ ကြိုးတွေ သွားတတ်တော ့မှ အပြည် ့ရတယ်ဂျ။ဟုတ်ပါပြီ စာလည်းနည်းနည်းရှည်သွားပြီး..အခက်အခဲ ရှိလို ့ပါဂျာနော်.သိတဲ ့သူများရှိရင် ပြောကြပါအုံး။
MPT ကောင်းမကောင်းလည်း ၀ုိင်းပူးပါအုံးခင်ဗျား။ ။
ရှင်းနေတာကို .... အဲဒီကုလားကြီးပါဆိုမှ ... မဲမဲကြီးပေါ့လို့ ..... :P
MPT = Myanmar PetKyi (ပက်ကျိ) Technology
ကိုဇူးရေ..အခုလောလောဆယ်. ကျွန်တော်တိုု့ မန္တလေးမှာတော့ MPT က ကော်နက်ရှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာပါ.. ကျန်တဲ့လိုင်းတွေနဲ့စာရင်... အကိုပြောသလို.. သူတို့ ပေးတဲ့ Modem က မကောင်းပါဘူး အလုပ်လုပ်တာလည်း အပြည့်အ၀လုပ်မပေးပါဘူး ပြီးတော့ သုံးနေရင်းနဲ့ နည်းနည်း ကြာသွားရင်.. Modem က ပူလာပြိးတော့ လိုင်းက ကျကျ သွားပါတယ်..အဲဒီအခါမှာ.. Modem ကိုအအေးခံ ပြိးပြန်၀င်ရင် ရရသွားတက်ပါတယ်.. အဲဒီဒုက္ခက ကင်းအောင် လို့ သူတို့ ပေးတဲ့..Modem ကို မသုံး ပဲ..ကောင်းတဲ့ Modem အသစ်တစ်လုံး နဲ့ အစားထိုးလဲ. သုံး ကြည့်လိုက်ပါ.. အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်.. login လည်း တစ်ခါ ၀င်ထား ပြီးရင်. နောက်ထပ် စက်ကို ပိတ်လိုက်တာ တောင် ပြန်ပြီး ၀င်စရာ မလိုပါဘူး.. မော်ဇီလာ နဲ့ ၀င်တာ လည်း အဆင်ပြေပါတယ်....
အော်ရယ်ဂျင်နယ်.. မိုဒန်း အဖြူ လေးက ကောင်းပါတယ် လို ့နင့်ကို ဘယ်သူ က ပြောလို ့တုံးဟ...
ငါလဲ မိုဒမ်း အသစ် ၂ လုံး အပိုဆောင်ထားတယ်.. အော်ရယ်ဂျင်နယ် က Link မီး လင်းလိုက်
မှိတ်လိုက် နဲ ့ကိုက ကြည့်ရတာ စိတ်မချမ်းသာ ဘူးးးးးးးးးးးး
ငါတောင် အရင်က 256 နဲ့စက် ၁၁ လုံး သုံးတယ် ဘာမှ ဖြစ်ဘူး..
နင်က တစ်ယောက်တည်း သုံးပြီး အလိုကြီးနေတယ် ဟုတ်လား .. bandwidth မြှင့်လိုက်လေ..
ငါတော ့အခု 512 နဲ့ငြိမ် ့နေတာဘဲ... ကောင်းကောင်း ကိုမှ လိုချင်ရင်တော ့
IP star နဲ့Brodband လိုင်း နဲ့၂ လိုင်း ပူး ပြီး သုံး.. winmax က အရံထား ထား..
အဲတာ ဆိုတော့ကောင်းသွားမှာပါ ဟီးးးးးးးးးး
Login Page ကိုလေ ..
နဲ ့၀င်ကြည့်.. အခြား ဟာ နဲ ့ဆို နာ ့ဆီ မှာ login ၀င်မရတတ်ဘူးးးး
အင်ဗေးးးးးးးးလစ် ယူဇာ ဆိုတာ ဘဲ ပေါ်တယ်...:D
ရွဲ့ တာ မဟုတ်ပါဘူး သူတို့ကြောင့်လဲ ခုလို ၀င်လေဖောလို့ရတာပေါ့
ကျွန်တော့ ကောင်မလေးကို သည်းခံရသလို ပဲလို့ ကျွန်တော်က သဘောထား ပါတယ် သူက mpt ထက်ဆိုးတယ် သိပ်စိတ်မရှည်တတ်ဘူး ကျလိုက်တက်လိုက်နဲ့ ခီးခီးခီး
မော်ဒန်း . . အသစ်တစ်လုံး ၀ယ်ပီးတော့ အရေးပေါ်ဆောင်ထားချင်ပါတယ်. .ဒါပေမယ့် . . အသစ်၀ယ်ပီးတော့ configure မလုပ်တက်ဘူးဗျ . .လုပ်နည်း ကိုင်နည်းလေး ပြောပြကြပါအုန်း . .
မော်ဒန်းက ဘာမှ configure လုပ်စရာ မလိုပါဘူး.. သူ့ရဲ့ RJ 11 အပေါက်လေးနဲ့ RJ 45 အပေါက်လေး နှစ်ပေါက် မှန်အောင်ထိုးတက်ရင်ကို အဆင်ပြေပါတယ်.. Router နဲ့ သုံးတယ်ဆိုရင်သာ Router က Configure လုပ်တက်မှ အဆင်ပိုပြေတာပါ.. Router ကို Configure လုပ်တာ ကတော့ ကျွန်တော်လည် လုပ်တက်ဘူး...နော်..အဲဒါတော့ သူများမေး..........:):)
ငါ အဲဒါနဲ ့၀င်တာ yes no cencle တိတယ်မလား အဲဒါပေါ်လာတယ်။
ဒါပေ ့မယ် yes နိပ်လိုက်တော့ဟင် ့တေချင်တွားတယ်။
The page cannot be found တဲ ့..အဟင့်:106:
အဲလိုတော့ မပြောပါနဲ ့
ကောင်းပါတယ်ဗျာ setting တွေပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး။
network card လဲသုံး
server ထိုင်ထားရင် server config တွေသေချာလုပ်
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီကျော်တဲ့အချိန် မှာ
စက်တစ်လုံးတည်းဖွင့်ပြီးသုံးနော် မနက် ၆ နာရီဆိုရင်နားတော့။
ကဲ စပြီဟေ ့..ပြသနာကတော့။:2:
ကျွန်တော် သူတု ိ့ပေးထားတဲ ့မော်ဒန်း ကဒ်ကို လှဲ မယ်ဆိုတော ့...သူတို ့က အဲဒီ မော်ဒန်းကဒ်ထဲမှာ
ကုတ်ထည် ့့ထားတယ်(Program) ရေးထားတယ်ပေါ့ဂျာ။
အဲဒါကို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ကျွန်တော်လုပ်ဖူးတာကတော ့...အဲဓီမော်ဒန်း ကဒ်မှာ စိုက်ထားတဲ ့..ကြိုးနှစ်ကြိုးကို
ဆွဲဖြုတ်..နောက်၀ယ်ထားတဲ ့ဟာမှ သွားထည် ့လိုက်တာပါပဲဂျာ။
အခုဟာ ကတော်တော်ဆိုးနေတယ်..မထိရဲ အောင်ပဲ။
အရင်လုပ်နည်းအတိုင်းလုပ်လို ့စီရင်လည်း...ကုတ်ထည် ့ထားတယ်ဆို ၀ယ်ထားတာပဲ
အဖတ်တင်မှာမို ့လို ့ပါ။ အဲဒါဆို အပေါ်က ထောင်းမှာ အဟင် ့
၀ုိင်း၀န်း ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးခင်ဗျား။ ။ :77::77:
mpt adsl modem configure ကို ရုံးမှာသွားလုပ်တာ ၁၀၀၀၀ ပေးရတယ်။ ) ကိုယ်ဘာသာ လုပ်လို့ရသလား။ နည်းပေးပါအုံး:39:
ကိုကြီးပေါက်တို ့က လုပ်ပြီ ကျွန်တော်က အလုပ်မှာလေ
မနက် ၁၀ နာရီလောက်ဆို ဖွင့်ပြီ ညနေ (၅)နာရီလောက်မှ ပိတ်ရတာ။
ဒါပေ ့မယ် ဂျာ..ပြုတ်လိုက်ပြန်တတ်လာလိုက်နဲ ့...စိတ်ညစ်ဖို ့ကောင်းပါတယ်ဂျာ။
သူ ရဲ ့main pages ကို Firefox မှာဘယ်လိုခေါ်၇သလဲ မသိဖူးဂျာ။
အနော်ခေါ်တာမ၇ဖူး။ No proxy ပေးပြီးခေါ်တာနော်..လုံး၀ပဲ။
ှုIE နဲ ့ပဲ ရတယ်။ ။
ဇူးညီ ဒီကလဲသိတယ်နော ဒုက္ခဘယ်လောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ။ ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ် ။ modem ပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုလဲပြောင်းပစ်လိုက်ချင်တယ်လေ ။ လာသုံးတဲ့သူတွေပူညံနေတာ နားမခံနိုင်ဘူး ။ ထိုင်လိုက်ထလိုက် လိုက်လုပ်ပေးနေရတာ တော်ကြာကျပြန်ပြီ တော်ကြာ gmail က မ၀င်ဖူးနဲ့ ကြာတော့ ခြေသလုံးကြီးလာတော့မယ် ။ အကြံကောင်းလေးများရှိရင်လဲပေးကြပါဦးဗျာ ။ ကောင်းတဲ့ modem လေးများရှိရင်လဲလမ်းညွှန်ပါဦးလို့ ........................
MPT က Modem ကိုလည်းလို့ရပါတယ်။ ဘာမှမသတ်မှတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာတော့မသိပါဘူးနော်။ MDY မှာကတော့ လိုင်းလာတက်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကဘာမှမပြောပါဘူး၊ ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ Linksys modem ကိုသုံးနေပါတယ်ဗျ။ mpt ကို login ဝင်ရင်တော့တစ်ခါတစ်လေတိုင်ပတ်ပါတယ်။ mpt server not found ဆိုတာလည်းကြုံရပါတယ်။ ၂ခါ ၃ခါလောက်ဝင်ရင်တော့ရပါတယ်(server down နေချိန်မပါ):Dအစ်ကိုဆီမှာရမရတော့မသိဘူးနော်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ login ဝင်ရင် Firefox ရဲ့ network setting မှာ manual proxy configuration မှာ 203.81.72.200:8080 ဆိုပြီးဝင်ထားပါတယ်။
(https://mptadsl.net.mm/WGraden/Popup.php) ကို home page ထားပါတယ်။
automatic configuration URL မှာ select ပေးပြီးတော့ http://mptadsl.net.mm/ လို့ထားပါတယ်၊(ဒီ setting က ISA server ပါမှရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အပေါ်က config အရင်လုပ်ပြီး login ဝင်ကြည့်ပါဦး။ရမှာပါ)
home page ကိုတော့ထားပါတယ်၊ဝင်လို့လည်းရပါတယ်။
မော်ဒန်းက ဘာမှ configure လုပ်စရာ မလိုပါဘူး ဆိုတာ မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်နော်. . . .ကျွန်တော် ဆိုင်ဖွင့်စတုန်းက . . ညဘက်သုံးနေရင်းနဲ့ ကွန်နေရှင်ကျသွားလို့ မော်ဒန်းက reset ခလုပ်လေးကို နှိပ်ကြည့်မိတာ . .နောက်နေ့တစ်နေကုန် ကွန်နရှင်မရလို့ ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ပြေးလိုက်ရပါရောလား . . .နောက်ပီး သူတို့ပေးတဲ့ မော်ဒန်းအဖြူလေးကို မကြိုက်လို့ အသစ်၀ယ်ပီးတက်ကြည့်တော့လည်း မရပြန်ဘူး . .ရုံးကိုသွားပြတော့လည်း သူတို့လည်း မလုပ်တက်ဘူးဆိုလို့ ရန်ကုန်ရုံးကို လုပ်ခိုင်းရတယ် . . .ကိုယ်ဘာသာကိုယ်လုပ်တဲ့နည်းလေးရှိရင် ပြောပြကြပါအုန်း . . .
ငါ မေ့နေတာ ပြောဖို ့..
ငါ သုံးတာ က chrome နဲ ့ဟ.. နောက် opera နဲ ့လဲ Login ၀င်တယ်..
Login မှာ ကွိုင်တတ်ရင် cookies ရှင်းပြီး ၀င် ရတယ်..ငါတော ့အိုတေတယ်..ဟ
အထက်က ထောင်းတာများ ဟာ.. ..
အခု စက်က နင့် အလုပ်က စက်လား.... အလုပ်က ဆိုရင် အထောင်းမခံရအောင်
အလုပ်ရှင် ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် အရင်ဆုံးရှင်းပြ .............
ပြီးရင် လဲ သင့်တာ အကုန် လဲခိုင်း... ဟီးး နင့်ကိုပါ လဲသွားအုံးမယ်နော်..:D
အစ်ကိုမောင်ရေ ဘယ်တော့မှ modem ကို reset သွားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ power ကိုဘဲ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါဗျာ။ reset သွားလုပ်ရင်လည်း modem ထဲဝင်ပြီးရင် setting ၂ခုလောက်ပြင်လိုက်ရင်ရပါတယ်။(ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ modem မှာဆိုရင်ပါ) တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူထင်ပါတယ်။
အင်း ကျွန်တော်ကြုံရတာ တော်တော်များပါတယ် mpt က အဆင်ပြေတာ အရမ်းနည်းတယ်။ လိုင်းက မငြိမ်ဘူး တက်လိုက်ကျလိုက်။ သူ ့တို ့ပေးတဲ့ Midas Moderm အဖြူလေးကလဲ တလွဲ။ မီးဗို ့အား ၂၂၀ မပြည့်ရင် အလုပ်ကို မလုပ်ဘူး။ နောက်တခုက ကိုယ့်ဖက်က မီးအားပြည့်တောင် မီးပျက်သွားရင် လိုင်းမတက်တော့ဘူး။ ပိတ်ပီး ပြန်ဖွင့်မှရတယ်။ မေ့နေရင် သေပီး။ မနေ ့က အင်တာနက် ဆိုင်အသစ်တခုမှာ spidar web က mpt လိုင်းအသစ်လာတပ်ပေးပါတယ်။ သူ ့တို ့လဲပြန်ရော လိုင်းလဲ မတက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် ကြုံတွေ ့ရသလောက်တော့ ၉၀ % ကလိုင်းမငြိမ်ဘူး။ Main ထဲမှာတော့ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ အိမ်တွေမှာသုံးတဲ့ ဟာတွေတော့ အဆင်ကိုမပြေတာပါ။
mpt မော်ဒန်းတွေကတော့ အတူတူပဲခင်ဗျ . .ဟိုတစ်ခါက ဆိုင်မှာ လိုင်းမတက်တော့ . .ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပီးပြောတော့ . .မော်ဒန်းကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုပီး . .ကိုယ့်မော်ဒန်းကို ယူပီး တခြားဆိုင်မှာ သွားစမ်းခိုင်းဖူးတယ် . . .ကျွန်တော့ဆီက မော်ဒန်းကို တခြားဆိုင်မှာ တပ်ပီးစမ်းတာရတယ်ဗျ. . .
modem ထဲဝင်ပြီးရင် setting ၂ခုလောက်ပြင်လိုက်ရင်ရပါတယ် . .ဆိုတော့ ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုပြင်ရတာလဲဟင် . .ပညာရချင်လို့ပါ . . .
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ၂ခု ၃ခုပြင်ရင်ရတယ်ဆိုတာ သူတို့ပေးတဲ့ modem မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က လိုင်းစယူတုန်းကစပြီးတော့ MPT modem ကိုမသုံးပါဘူး။သုံးတာက linksys modem ကို သုံးတာဗျ၊
သူတို့ modem setting ကိုတစ်ခါမှဝင်မကြည့်ဘူးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် modem setting ပြင်ပုံကသိပ်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။မသေချာလို့မရေးတော့ပါဘူး။ပြန်စမ်းကြည့်ပြီမှရေးပေးပါမယ်။
အကိုပြောတဲ ့....မောဒန်း linksys (CISCO) လား!!! အမည်းနဲ ့လေ ဟုတ်လား အကို
အဲဒါ Router မဟုတ်ဖူးလားခင်ဗျ။
ကျွန်တော်မော်ဒန်းက Midas, Router က linksys အဲဒီလို သုံးထားတယ်။
အကို က နောက်တာလားခင်ဗျ။
server ထိုင်ထားရင် server config တွေသေချာလုပ်[/HTML]
အဲဒါတွေ က ထားပါတော ့
အဲဒါတွေကတော့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ ့လူတိုင်း သိတာပဲ ဟာကို။
စက်တစ်လုံးတည်းဖွင့်ပြီးသုံးနော် မနက် ၆ နာရီဆိုရင်နားတော့။[/HTML]
အဲဒါတွေ လုပ်ပြီးတော့မှ ည (၁၂)နာရီကျော်တာတောင် တစ်လုံးတည်းသုံးရမယ်ဆိုရင်တော ့
MPT ကို အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ ့ရန်တိုက်ဖို ့ကောင်းနေပြီခင်ဗျ။
ဆိုတဲ ့စကားကို လွယ်လွယ်မပြောနဲ ့ခင်ဗျ။
ဒီဘက်က လူက တစ်ကယ် ဒုက္ခရောက်နေတာ။ ။
အစ်ကိုဇူးဇူးအောင် ပြောမှဘဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါတယ်၊ Linksys ADSL Modem လို့တော့ရေးထားပါတယ်ဗျ။ model No. AM300 လေ။ ဟုတ်ပါတယ် Modem ပါ။
model No ကိုရိုက်ပြီးတော့ Google Image မှာရှာကြည့်တော့ဗျာ။ပုံမထည့်တက်လို့ဗျ။:D
ရပြီအဲဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်တယ် ပုံနဲ ့ရှင်းပြစရာမလို ပါဖူးအကို
ကျွန်တော်ကတော့ Linksys ADSL Modem ကို သဘောမကျဘူး။ usb port နဲ ့SMC ADSL Modem ကတော့ ကောင်းပါတယ်...configure ချတာကတော့ ကျွန်တော်ကိုတိုင်တောင် တတ်ပါဘူးဗျာ ဒါပေမဲ ့
ကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်ရတာက 1mb လိုင်းလောက်ယူထားပြီးတစ်လုံးတည်းသုံးရင်တောင် usd 100 လောက်ပဲလစဉ်ကြေးပေးရတာပါဗျာ။ အမေရိကားလိုနိုင်ငံမျိုးတောင် တစ်လုံးတည်းသုံး usd 50/month လောက်ပေးနေရတာ။ အတူတူပါပဲ။
အမေရိကားမှာ cafe ဆိုင်ဆိုတစ်နာရီ usd5လောက်ပေးနေရတာ။
ဒီမှာက တစ်နာရီ ၂၅၀ လောက်ပဲပေးရတာ ဒီလောက်ဆိုရင်မြန်နေပါပြီကောင်းနေပါပြီ
အခက်အခဲကတော့အမြဲရှိနေမှာပါ။ ပြီးတော့ internet ဆိုင်တော်တော်များများက ကိုယ်တိုင် config
လုပ်ထားတာများတော့ professional server ထိုင်တတ်တဲ့သူများထိုင်ပြီးသုံးတာမဟုတ်တော့
client များခွဲလိုက်ရင် conflict ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း bandwidth control မလုပ်တာကတစ်ကြောင်း ဆိုတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ ဆိုင်ထဲမှာတင်ကို connection time out များကထွက်နေပြီဆိုတော့ကာ စိတ်သွားတိုင်းတော့ကိုယ်မပါနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးသုံးရတာကိုက တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ adsl မပေးခင်ကတည်းက
dial up သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့က တော့ :6: mpt ကောင်းပါသည်။:6:
ကြာရင် အကိုဟာက လည်း နော် စိတ်ညစ်စရာ
ADSL က နေ Dial up ဖြစ်တွားပြန်ပြီ...ထပ်ပြောရင် အနော်ကိုကြီး ကို အလက်ဇန်းဒါးပြောသလို
ထားပါတော ့ဂျာ...ကဲ ့အခု ကျွန်တော်တို ့ဟန် ကျွန်တော်တို ့နည်းနဲ ့
MPT (ADSL) ကို အဆင်ပြောအောင် ဘယ်လို သုံးကြမလဲ ခင်ဗျား။
သိသူများ ပြောကြပါအုံးခင်ဗျ။ ။
mpt adsl ကဘာမကောင်းလို့ပါလဲ။
အခက်အခဲရှိရင် mysteryzillion ရှိနေတာကို ဘာပူစရာလိုလို့လဲ။
အခက်အခဲရှိရင် mysteryzillion ကဖြေရှင်းပေးနေပါပြီ။
မကောင်းတဲ့ အချက်က software တွေ ဒေါင်းလိုဒ့် လုပ်လို့ မရဘူး..ဟိုဘန်းဒီဘန်းနဲ့..blogspot တွေလုပ်လို့ မရဘူး..လေ့လာလို့ မရဘူး.စမ်းလို့မရဘူး..ငါတို့လို နယ်ကလူတွေ ဆိုတော့ ဘာသင်တန်းမှ လည်း မရှိဘူး..အဲဒီတော့ blogspotလေးတွေ ကိုစာတွေ ဖတ်၊မှတ် ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ ဘန်းလိုက်ပြန်ပြီ..ဟိုက အလားကားတံထွေးစင်အောင် ရော့ရော့ ဆိုပြီးပေးပေမယ့် ..ဒီက သူဌေးတွေတော့ လက်မခံဘူး..ဟွန်း အဲဒါတွေကမကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့..
ကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်းရှိတယ်..ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့ချက်တွေ က ပိုများမယ်ထင်တယ်...:)):P
I really mean it.I am about buy mpt ADSL 256mbp from reseller in Yangon with 19.5lakhs.now I have to reconsider it.I want to know is they prevent downloading or not?Originally I got connection from nearby netcafe and have to pay 30,000ks.But they prevent downloading by limiting bandwidth.The largest file I can download is 4mb and it really takes 1 and half hour to complete.I can only use internet only in service hour and I can only watch websites and cannot do anything.please give me some advice for what should I do?thank you.
အမ်ပီတီကောင်းပါသည်.....စိတ်ညစ်ဖို ့ပါ:14::14:တိုဇူးရေ တိုဇူး သရက် မှာက အမ်ပီတီကောင်း
မကောင်း vote လုပ်တဲ့အခါမှာ မကောင်းတဲ့ဘက်က သာနေလို ့အဲ့တာကြောင့်မလို ့ညီသွားအောင်လို ့
အနော် ကောင်းတဲ့ဘက်က vote ပေးလိုက်တာပါ:P:P ညီသွားစေရမယ်:D
ဘယ်လိုမျိုး သုံးလို ့ကောင်းတာလဲ ခင်ဗျ...
ကြည် ့ရတာ အကို သုံးတဲ ့ဟာက ထူးထူးခြားခြား တူများထက်ထူး နဖူးပေါ် အင်တင်နာတိုင် ပေါ်ပြီး
ကွန်တွေ အရမ်းမိနေတယ်ထင်တယ်.အဟိ စတာနော် စိတ်မဆိုးနဲ ့။
ဘယ်လို configure လုပ်ထားလဲ ဟင် ?
နည်းလေးရှိရင် မျှပါအုံးအကိုရယ်။ ။
-mptadsl လိုင်းတွေချပေးလာမှ internet ဆိုတာဒါပါလားဆိုတဲ့ လူတွေ များလာတယ်။
-mptadsl လိုင်းတွေကြောင့် အများဆုံးသော internet cafe ဆိုတာတွေပေါ်လာလို့ အခြေခံလူတန်းစား ကွန်ပျူတာနားလည်တဲ့သူတွေ အင်တာနက်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေရလာတယ်။
-နိုင်ငံရပ်ခြား နှင့် မဖြစ်မနေဆက်သွယ်ရတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် မေ၀းတော့ဘူး။
-ပညာသည်အုံပုန်းသီးများအတွက် လေ့လာသင်ယူစရာ နေရာတစ်နေရာတိုးလာပြီပေါ့။
ရှင်းရှင်းပြောရင် လိုင်းနှေးတယ်မြန်တယ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့အထင်ပြောရရင်
၁။ adsl ဆိုတာက ဖုန်းလိုင်းကသွားတာ ဖုန်းလိုင်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်၊
၂။ server မခံပဲသုံးတဲ့ net cafe , band width control လုပ်မထားတဲ့ net cafe တွေမှာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်က download ဖိုင် ကြီးကြီးချရင် ကျန်တဲ့ client တွေလစ်ပြီပေါ့။
ကျွန်တော့လိုင်းက ကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူး။ mpt ကကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာ။
မကောင်းတာကတော့ * * *
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီလောက်ရနေတာကိုက ကောင်းနေပါပြီ။ မရရင်တောင် အင်တာနက်လေးနဲ့ေ၀းနေရတာ။ စိတ်မချမ်းသာစရာကြီးပါနော်။ အဲဒါကို အင်တာနက်လိုင်းမရှိတဲ့
နေရာရောက်နေတဲ့ အင်တာနက် crazy တွေသိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မရတာထက်စာရင် နှေးနှေးလေးရနေတာကိုက စိတ်ကျေနပ်စရာပါလားလို့တွေးကြည့်ပါ။
အရာရာကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ကောင်းလွန်းချင်ရင်မခက်ပါဘူး money ပါဘဲ။
မြန်ချင်သလားရပါတယ်။ မခက်ပါဘူး money ပါဘဲ။
ကျွန်တော့ ဆီမှာတော့ အင်တင်နာတိုင် မပေါ်ပါဘူး။
ipcop နဲ့ server ထောင်ထားပြီး virus အတွက်တော့ rising လေးပဲသုံးထားတာပါ။
modem ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကပေးတဲ့ modem လေးပဲသုံးပါတယ်။
စဖွင့်ဖွင့်ခြင်း dsl မီးလေးငြိမ်ဖို့ကြာရင်တော့ ဖုန်းကနေ 01 လေးနှိပ်ပြီး၀င်ပါတယ်။
1 mb လိုင်းယူထားပြီး client ၁၁ လုံးခွဲထားပါတယ်။ network hub ကတော့ d-link 16 port သုံးပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ထူးထူးထွေထွေမသုံးထားပါဘူး။ configuration တွေကတော့
software တွေဒေါင်းလို့မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလည်း။ ဖိုင် size ကြီးတာကို ဒေါင်းလို့မရတာပြောတာလား။
blogspot က proxy တွေနဲ့ကျော်လည်းရပါတယ်။ ဥပမာ freedom,freegate,ဒါမှမဟုတ်
web proxy www.24proxy.com. weprox.net, blockedsiteaccess.com စသည်ဖြင့် ကျော်လို့ရပါတယ်။
အခု mysteryzillion forum ကိုဖတ်လို့ရပြီဆိုမှတော့ သင်တန်းတွေမရှိလည်း မပူပါနဲ့ သိချင်တာမေး
ဖြေမယ့်သူတွေ အများကြီးပါ။ မကောင်းတာတွေကို တော့ ပစ်ထားလိုက်ပါတော့။
Dear ko zuzu,
it error is not modern error , it is only power adapter . i also over it's case last 5-6 month .... you can connect half hour or 1 hour and connection is go down after connect 30 or 1 hour ...
your connection is will lost every hour... if connection is down and can't join to mpt server ... very difficultly i also like this case ... you need to buy new modern and call one of mpt officer and setting up your new modern ( give to him service charges) ...
now i use SMC modern for MPT connection ...
Don't you believe ... as i told ... you can test your modern when you called mpt office and you can told to him/her takea( test ) modern from MPT office. if you gotamoden from mpt officer ... change your adapter with his/her's test modern adapter ....
your connection is stable and as well .... ok Go on .... friend ...
However now i use mpt 512 kb connection can download not over 30 kbps...
i think so ... 30 kbps is download speed of 256 plan ... last month i can download around 60 kbpd to 75 kbps... thus ! i go to call phone to MPT Office ... BUT they told me all of MPT connection is very very too so so slow right now ... HOW CAN I SAY ? I TOLD TO THEM ... Oh My GOD !!! really ... i have not myanmar font ... spelling will be miss ...
kopauk ရေ ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်. . server မထောင်ထားတော့ . .အကိုပြောသလိုပဲ ကွန်နရှင်ပြဿနာရင်ဆိုင်ရပါတယ် . .အစ်ကို့လိုမျိုး server ထောင်ချင်ပါတယ် . . .လုပ်နည်းကိုင်နည်းလေးပြောပြပါလား . . .ကျွန်တော့်ဆီကိုလည်းအဆင်ပြေရင် email ပို့ပေးစေချင်ပါတယ် wunnamg အက် ဂျီမေးပါ . . နောက်ပီးserver ထောင်လို့ရှိရင် client ကနေ ဆော်ဒီ proxy တို့ဘာတို့ ပြောင်းချိန်းပီးသုံးလို့ရပါသလား . .proxy နေရာမှာ server ip ပဲ ထည့်ရတာလား . .TCP/IP မှာ ဂိတ်ေ၀းနေရာမှာပဲ . .server ip ကိုထည့်ပီး . .သုံးလို့ရပါသလား . .သိချင်ပါတယ် . .ပညာရှာနေသူမို့ပါ . . server သုံးချင်ပေမယ့် . .မသုံးဖူးတော့ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာရင် ဆိုင်ပိတ်နေရမှာမို့လို့ပါ . .:D . .ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . .
ကဲဂျာ ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော ့ဖူး။ဒီလို လုပ်ကြည် ့။ ။
Run>cmd>ping 172.24.0.3 -t
အခုတော ့..အဲဒါချည်း ဖွင့်ထားပြီး အလုပ်လုပ်နေရတယ်။
တစ်ခုတော ့ရှီတယ်..ဒီနေ့ညနေပိုင်း တော ့..ခဏလေးကောင်းနေတယ်ထင်တယ်။
ဘာမှ ပြသနာမရှိဖူး တစ်ချက်တစ်ချက်တော ့လွတ်လွတ်သွားတယ်
အကောင်းကြီးမဟုတ်ဖူး..အဆိုးဆုံးဘက်ကို လည်းမရောက်သေးပါဖူး။ ။
စောင့်ကြည် ့သေးတာပေါ ့ခင်ဗျာ။
စောင့်ကြည် ့သေးတာပေါ ့ခင်ဗျာ။ :d
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါ။မေ့နေမှာစိုးလို့ပါခင်ဗျာ။သတိပေးတာပါစိတ်မချိုးရဘူးနော်:d
အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုရင် server ကထောင်ကိုထောင်ရမှာဗျ။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ရင်တောင် ကျွမ်းကျင်သူကိုအားကိုးရမှာပဲ linux ကောင်းတယ် window ကောင်းတယ်တော့မပြောပါဘူး
သူဟာသူတော့ကောင်းကြတာချည်းပါပဲ။ နောက်ပြီး server ထောင်ပြီးရင် တခြား proxy ပြောင်းထည့်သုံးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျ။ TCP/IP ဆိုတာက server ip နှင့် မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုယ်ကြိုက်တာကိုပေးထားလို့ရပါတယ် မတူရင်ရပါတယ်။ TCP/IP ဆိုတာက မိမိဆိုင်တွင်း network ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ server ထောင်ပြီးသွားရင် server log on လုပ်ပြီးတာနှင့် သူ့ရဲ့နောက်ထပ် network ကဒ်မှ hub ကနေတဆင့် ခွဲထားသော client အားလုံးသုံးလို့ရပါပြီ။
mpt ကောင်းလား မကောင်းလား ဆိုရင် ကောင်းလည်းကောင်းတယ် မကောင်းလဲ မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ရမလားပဲ......ကိုပေါက် ပြောသလို Mpt ကြောင့် မြန်မာပြည် အထူးသဖြင့် နယ်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးလို့ရနေတယ်ဆိုရင်ပဲ...ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်.....
အဲဒါ ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်.......
အဲ ပြဿနာကတော့ အရင့်အရင် ဆွေးနွေးထားကြသလိုပါပဲ bandwidth limit ကိစ္စ
modem ကိစ္စ connectoin ခဏခဏ ကျတဲ့ကိစ္စ ....အဲဒါလေးတွေ ပြင်လိုက်ရင်တော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းသွားမှာပါ.....
လုလု သုံးနေတဲ့ modem ကလဲ mpt က ပေးတဲ့ ဟာပါ....ခု ပူပြီး ခဏခဏ လိုင်းကျနေတဲ့ ကိစ္စ ဖြေရှင်းချင်လို့ modem ထပ်၀ယ်ချင်လို့့ပါ......ဘယ်ဟာ ၀ယ်ရမလဲဆိုတာ အကြံပေးချက်လေးနားထောင်ချင်ပါတယ်ရှင်..ပြီးတော့ ဇူးဇူးပြောတဲ့ကိစ္စပါ...
၀ုိင်း၀န်း ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးခင်ဗျား။ ။
အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်သိရမှ ဖြစ်မှာပါ...အတတ်နိုင်ဆုံး (သိတဲ့သူများ) အမြန် ဖြေကြားပေးပါလားရှင်...အရေးကြီးနေလို့ပါ
ပူပြီး လိုင်းခဏခဏကျတယ်ဆိုတာက dsl မီးလေးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားတာလား လိုင်းအားနည်းသွားတာကိုပြောတာလား
အဲဒီ modem က ups ကောင်းကောင်းနှင့် ခံထားပါမှ စိတ်ချရပါတယ်။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
လိုင်းကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကြိုးခွဲထားရင်လည်းဂရုစိုက်ပါ။ ဖုန်း၀င်လာတာတို့ ခေါ်တာတို့မှာကျသွားရင်လည်း ဖုန်းလိုင်းကိုပြန်စစ်ပါ။ နောက်ဆုံး phone ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
အချိန်ကြာလို့ပူတာကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ အရင်တုန်းက ဗွီဒီယိုပြစက်တွေအအေးပေးတဲ့ပန်ကာနှင့်သာ modem ကို အအေးသာပေးထားပါ လုံး၀မပူတော့ပါ။
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ mpt မိုဒမ်းကို အဲလိုအအေးခံထားတာလုံး၀မပူပါ။ ဖုန်းလိုင်းစစ်ပြီးကတည်းက လုံး၀မကျပါ။ မိုဒမ်းအသစ်၀ယ်လိုက၀ယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာတော့ ၀ယ်သုံးတဲ့မိုဒမ်းလည်းရပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့မရခဲ့လျှင်လည်း ဆက်သွယ်ရေးသို့ အကြောင်းကြားပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နေရာဒေသ မြို့မတူခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း မိုဒမ်းပြောင်းသုံးလို့မရနိုင်သည်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ PAC ရှိထားသူများအတွက်တော့ မပြောင်းမဖြစ်ပြောင်းရမယ်ထင်လျှင်စိတ်အေးအေးပြောင်းသုံးပါ။
ပူပြီး လိုင်းခဏခဏကျတယ်ဆိုတာက dsl မီးလေးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားတာလား
ဟုတ်ကဲ့....DSL မီး က မှိတ်ကို မှိတ် သွားတာပါ....
လိုင်းအားနည်းသွားတာကို မဟုတ်ပါဘူး......လိုင်းကျသွားတာပါ.....အဲဒါကို ပါ၀ါ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်...သုံးနေတာ ၁ နှစ်နီးပါး ရှိနေပြီး အခုမှ ဖြစ်လာလို့ modem ပျက်ချင်နေတာလား မသိဘူးလို့ ထင်လို့ အသစ်၀ယ်ပြီးဆောင်ထားမလားလို့ စဉ်းစားတာ ပါ...
အဲဒါလည်း မီးအားငြိမ်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ UPS ကောင်းကောင်း နဲ့လုပ်ထားပေးပါတယ်.......
ဖုန်းကြိုးခွဲထားရင်လည်းဂရုစိုက်ပါ။ ဖုန်း၀င်လာတာတို့ ခေါ်တာတို့မှာကျသွားရင်လည်း ဖုန်းလိုင်းကိုပြန်စစ်ပါ။ နောက်ဆုံး phone ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
ဖုန်းကြိုးက ခွဲတော့ ထားတယ်...ဖုန်းအ၀င်အထွက်မှာတော့ မကျဘူး ဖုန်းပြောင်းသုံးဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ မသိဘူးနော်....
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ mpt မိုဒမ်းကို အဲလိုအအေးခံထားတာလုံး၀မပူပါ။ ဖုန်းလိုင်းစစ်ပြီးကတည်းက လုံး၀မကျပါ။
မနေ့က အဲဒီလိုထင်တာနဲ့ ပန်ကာ အသေးတစ်လုံး ၀ယ်ပြီး မှုတ်ထားလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ််
မိုဒမ်းအသစ်၀ယ်လိုက၀ယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာတော့ ၀ယ်သုံးတဲ့မိုဒမ်းလည်းရပါတယ် ။
ကိုပေါက်တို့ဆီမှာ mpt modem ပဲသုံးထားလား ..ဘယ်လို မိုဒမ်းမျိုးက ကောင်းတယ်လို့ကြားမိပါသလဲ
တစ်ကယ်လို့မရခဲ့လျှင်လည်း ဆက်သွယ်ရေးသို့ အကြောင်းကြားပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နေရာဒေသ မြို့မတူခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း မိုဒမ်းပြောင်းသုံးလို့မရနိုင်သည်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ PAC ရှိထားသူများအတွက်တော့ မပြောင်းမဖြစ်ပြောင်းရမယ်ထင်လျှင်စိတ်အေးအေးပြောင်းသုံးပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကို မေးတော့ထားပါတယ်...PAC ရှိနေတော့ ပြောင်းထားရမလို့ပါ....
ဖြေပေးတဲ့ ကိုပေါက် ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်....:6:
MPT ကကိုင်တဲ့...IPstar ကတော့ပြည်မှာတော်တော်လေးကိုညံတယ်ဗျို့
အဲဒါတော ့ဟုတ်တယ်ဗျို ့...တော်တော်စုတ်တယ်ကြားတယ်။
မသုံးဖူးသေးဖူး အဲဒါတော့ အဟီး
mpt နဲ ့က ေ၀းလေ..အေးလေ
တိုဇူး အနော်ပြောတာမှတ်မိသေးလား vote ပေးတာက ညီစေရမယ်လို ့လေ အခုညီဘူးလား ကဲ
ဘာပဲပြောပြော အမ်ပီတီက ရွန်နီလိုဗျ ခြေရူး အဲလေ လိုင်းရူး ကောင်းတာလည်း ကောင်းပါတယ်
မကောင်းတာလည်း မကောင်းပါဘူး အဲ့တာကြောင့်မလို့ညိီသင့်တယ်ဗျာ:P
အခက်ခဲဆိုတာတင်ပြမှရတာပါ ။ ထိခိုက်လိုစိတ်လဲမပါပါဘူး ။ ဒါPostကိုတင်တာလဲ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်ခဲလေးက မသေးတော့လို့ပါ ။ သိစေချင်တာကတော့ ထား၀ယ်မြို့မှာပေါ့ဗျာ ။ ဘာတွေခက်ခဲမှုရှိနေသလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျ ။ connection ကတော်တော်လေးပြတ်တယ်ဗျာ ။
တလမှာမပြတ်ဘူးဆိုရင် ၁၀ရက် ၁၅ရက်လောက်ပြတ်မယ်ထင်တယ် ။ ဒီလတော့တော်တော်လေး
ဆိုးတယ်ဗျာ ။ ဆိုင်သစ်လေးပါ ။ ကွန်နရှင်ကောင်းလို့ဆိုင်လေးလဲနာမည်နဲနဲရလာတာပဲ သိပ်တော့မကြာဘူး ကွန်နရှင်ပြတ်တာနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ် ။ ၄ရက်တဲ့ ။ ပြီးတော့ပြန်ရတယ် ၁ရက် ပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ် ၄ရက် ။ အဲဒီနေ့ကစပြီးပြန်ရတော့လဲ ကွန်နရှင်ကမကောင်းတော့ဘူး ဘယ်လောက်မကောငး်လဲဆိုရင် Only Gtalk ပဲဖြစ်နေတယ်လေ ။ ဒါတောင်ဗျာ Gtalk ဆိုတာတောင် ထွက်သွားလိုက် ပြန်၀င်လိုက်နဲ့ တစ်ခါတစ်ခါကျ ပြန်တောင်မ၀င်တော့ဘူး ။ သိပ်မကြာပါဖူး ပြန်ပျက်တယ်ဗျာ သုံးတဲ့လူတွေလဲသိတယ်မလား ။ လာလာမေးတယ်လေ ကွန်နရှင်ရလားဆိုပြီး ဖြေရတာလဲအာကိုပေါက်မယ် ။ မေးတဲ့သူတွေကလဲကြာတော့ မမေးတော့ဘူး ။ တစ်ခါလာလဲမရ နောက်တစ်ခါလာလဲမရ သွားပြီပေါ့ ။ မလာတော့ဘူး ။ ကွန်ပြန်ရတာနဲ့ သိတဲ့လူမရှိဘူးလေ ။ ဆိုင်မှာသိတယ်မလား လူဆိုတာ ကျွန်တော်ပဲရှိတာ ။ သုံးတဲ့လူမရှိ ။ ဆိုင်နာမည်အတွက် ကွန်ပြန်ရရင်ရုန်းရတော့တာပေါ့ ။ ဘယ်လောက်ထိရုန်းရတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင်သာ သိပါတော့တယ်ဗျာ ။ ကွန်နရှင်ပြတ်တောင်းမှုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဓါတ်လုံးလုံးကျစေသလိုပဲ ။ ဘာမှကိုလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ကိုမရှိတာပါ ။ အခုမှစဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဆိုတော့လဲ အရင်းနှီးလေးတော့ကျေသွားချင်တယ် ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင်စဖွင့်တာပဲရှိသေးတာ အရင်းနှီးသာကြေနေတယ်ဆိုရင် ဆိုင်ပိတ်ဖြစ်မှာသေချာလောက်တယ် ။ ထပ်ပြောမယ်ဗျာ ကျွန်တော်ပြောတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်လိုစိတ်လုံး၀မပါတာအမှန်ပါ ။ အခက်ခဲလေးတင်ပြတာပဲ ဘယ်မှာတင်ပြရမှန်းကိုမသိတာနဲ့ ဒီအတိုင်းနေတာကြာပြီ ပိုစ့်တွေလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒါနဲ့ပက်သက်တာ တွေ့တော့ ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ အကယ်၍များ သက်ဆိုင်သူတွေသာ ဒီ Post ကိုဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုပါ ။ လိုင်းလေးကောင်းကောင်းနဲ့ ကွန်နရှင်ပြတ်တောင်မှု အဲလောက်ကြီးမဖြစ်အောင်ကူညီပေးကြပါလို့ သိပ်မကောင်းရင်တောင်နေပါ စိတ်ချမ်းသာသာအလုပ်လုပ်ရရင်ကျေနပ်ပါပြီလို့ ဒီMZ ကနေပဲ အထူးအသနားခံလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ထား၀ယ်မြို့က MPT ဆိုလဲမဟုတ်ဖူး ရန်ကုန်မြို့က MPT ကိုဆိုလဲ မဟုတ်ဘူး သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုသာ အသနားခံလိုက်တာပါဗျာ ။
လောဘနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ် အမေ့ကျေးဇူးဆပ်ချင်လွန်းတဲ့သားမိုက်လေးရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ပါ ။